Doorka wadaadada iyo nolosha Sweden - iftineducation.com
iftineducation.com – Iyadoo wadaadadu ahaayeen marjaca loo noqdo markii arin laysku qilaafo ama ay timaado arin lagu wareersanyahay ayaa wadaadada maanta ku nool Sweden waxay noqdeen kuwo iyaga laga cararo ka dib qilaafaadka iyo fatwooyinka lidiga isku ah ee ay bulshada siiyaan.
Qilaafaadka wadaadada ayaa gaaray in xitaa ay ku heshiin waayeen dhisida masaajida iyo tukashada salaada. Xaafadaha ay soomaalida u badantahay ee Stockholm ayaa waxaa ka taagan qilaafaad balaaran oo ku saabsan cida maamulaysa masaajida halkaasi laga dhisayo, iyadoo koox waliba doonaysa in ay masaajidka gaar u maamusho. Koox markaad u tagto ayay ku leeyihiin kuwaasi waa bidco iyo waa shiico, halka kuwa kale ay kuu sheegayaan in kuwa kale ay yihiin Qawaarij. Isqabqabsiga wadaada ayaa wiiqay doorkoodii iyo magacii ay ku lahaayeen bulshada dhexdooda.
Hogaankii ay laahaayeen wadaadada ayaa la dareemi karaa in uu meesha ka maqanyahay marka aad aragto dadka caadiga ah oo ka doodaya arimaha diinta. Wadaadada ayaa qaasatan wadankaan waxaa soo wajahay xaalado aysan horay u aqoon oo la xiriira arimaha shaqada, qilaafaadka qoyska iwm. Wadaadada ayaa midwaliba waxa uu bixinayaa fikrad u gaar ah. Su’aalaha badan ee dadku is waydiiyaan ayaa waxaa ka mid ah: Maka shaqayn karaa shaqadaan? Lacagtaas ma qaadan karaa? Deymaha? iwm. Wadaadada qaar ayaa dadka u baneeyay qaadashada daymaha.
Talooyinka isqilaafsan ee ay bixinayaan wadaadada ayaa keenay jahwareer ay ku suganyihiin Muslimiinta iyo xitaa gaalada lala macaamilo. Dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii la basaasay masaajida ugu waaweyn Sweden oo fadeexad ka dhalatay ka dib markii wadaadada masaajida ay talooyinka laga yaabay siiyeen haweenkii u tagay. Arintaas ayaa waxaa ka sii darin in wadaadadii la basaasay ay hadalo ka duwan kuwii ay u sheegeen dumarka ku hadleen markii saxaafadu la kulantay.
Ujeedada aan ka leeyahay mowduucaan waa in aan ka doodno doorka wadaada ku nool Sweden. Maka soo bexeen hawshoodii? Waa maxay sababta keentay qilaafaadka badan? Wadaadadu ma u noqon karaan dhalinyarada tusaale, haddii ay iyagu shaqo la’aan yihiin oo ay cayrta wax ka qaataan? Ma awoodaan wadaadadu in ay talooyin bixiyaan haddii aysan si fiican u aqoon sharciga Sweden balse ay diinta ku wanaagsanyihiin?